सोच्दै नसोचेका फाइदा रहेछ अण्डाको बोक्राको, यत्रो समय थाहै पाइएन – Jagaran Nepal
अन्डा प्रयोग गरेपछि त्यसको बोक्रा के गर्ने ? : यसको पनि अनेक काइदा छन् । अन्डाको बोक्रालाई मलखाँदको रुपमा फूल तथा तरकारीमा हाल्न सकिन्छ । त्यसबाहेक रंग लगाएर सजावटको सामग्री पनि बनाए हुन्छ । त्यसबाहेक ? त्यसबाहेक अन्डाको बोक्रालाई सौन्दर्य प्रसाधनकै रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । हालै भएको एक अध्ययन अनुसार अन्डाको बोक्रा छालाको लागि एकदमै लाभदायक हुन्छ । अन्डाको बोक्रामा उपस्थित प्राकृतिक एसिडले छालालाई सफा राख्ने एवं चम्किलो बनाउने गुण हुन्छ ।
कसरी प्रयोग गर्ने ? : अन्डाको बोक्रालाई मसिनो हुनेगरी पिसेर पाउडर बनाउने । यसरी तयार गरेको पाउडरलाई आवश्यक्ता अनुसर कहिले कागती त कहिले मह मिसाएर प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलाई जुन चिजसँग मिश्रण गरिन्छ, त्यही अनुसारको नतिजा हासिल हुन्छ । ।
अनुहार चम्किलो र जवान देखाउँछ : अन्डाको बोक्राको पाउडरमा कागती र मह मिसाएर एक गाढा पेस्ट बनाउनेअन्डाको बोक्राको मास्क बिस्तारै अनुहारमा लगाउने । केहि समयपछि सफा पानीले धुने । यसले अनुहारको छालाको रोम छिद्र खुल्छ र सफा हुन्छ । त्यस्तै उक्त पाउडरमा मह र बेसन मिसाउने । यस माक्स अनुहारमा राम्ररी लगाएर १५ मिनेटसम्म त्यतीकै छाड्ने । त्यसपछि सफा पानीले धुनुपर्छ । हप्तामा तीन पटकसम्म यो अभ्यास गर्नुहोस् । अनुहार जवान र चम्किलो हुन्छ ।
के हुन्छ प्रभाव ? : अन्डाको बोक्रामा प्राकृतिक प्रोटिन र भिटामिन्स हुन्छ । यसले छालालाई जवान र चमकदार बनाउँछ ।
बुढ्यौलीको संकेत मेट्छ : शोधका अनुसार ति महिला, जसको उमेर ३० बर्ष नाघेको छ, उनीहरुले अन्डाको बोक्रालाई आफ्नो सौन्दर्य दिनचर्यामा सामेल गर्नुपर्छ । अन्डाको बोक्राको पाउडर तीन-चार चम्चा लिने र यसमा दही मिसाउने । उक्त मिश्रणमा एक चुड्की बेसार मिसाउने र यो पेस्टलाई अनुहारमा लगाउने । २० मिनेटपछि सफा पानीले धुनुपर्छ । यो माक्सको प्रयोगले तपाईमा बुढ्यौलीको संकेत देखा पर्दैन ।
आँखा मुनीको रुखो छालाको उपचार : यदि तपाईको आँखाको तलको छाला सुख्खा छ भने त्यसलाई पूर्नजीवित गर्नका लागि अन्डाको बोक्राको प्रयोग गर्नुपर्छ । २-४ चम्चा अन्डाको बोक्राको पाउडर लिने । त्यसमा मह मिसाउने । दुबैलाई राम्ररी मिसाउने र गोलाकार बनाएर आँखाको आसपासमा मसा जगर्ने । प्रत्येक दिन सुत्नुअघि यहि विधी दोहोर्‍यामउने ।
यसरी छालालाई कोमल बनाउँछ : अन्डाको बोक्राको पाउडरमा घिउकुमारीमो जेल मिसाउने । यस माक्स अनुहारमा लगाएर सफा पानीले धुनुपर्छ । हप्तामा दुई पटक यो विधी अपनाउँदा छाला कोमल हुन्छ ।